बिहान खाली पेटमा भिजाएको चना खानुका फाइदा यस्ता छन्
Homeसमाचारबिहान खाली पेटमा भिजाएको चना खानुका फाइदा यस्ता छन्
November 4, 2020 admin समाचार 7535
स्व’स्थ जीवनका लागि हामीले खानेकुरामा वि’शेष ध्यान दिनुपर्छ । किनकी हरेक रोगको जड खानेकुरासँग जो’डिएको हुन्छ । के खाँदा शरीरलाई फा’इदा हुन्छ यसबारे सदैब स’चेत रहनुपर्छ ।
अधिकांश मानिसहरुमा खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर स्वा’स्थ्यमा जो’खिम नित्या’इरहेका हुन्छन् । त्यसैले खानपानमा वि’शेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । आज हामीले विहान खाली पेटमा भि’जाएको चना खानुका फा’इदाबारे प्रस्तुत गरेका छौं :
चनामा प्रश’स्त मात्रामा प्रोटिन पाइने हुनाले यसको नि’यमित सेवनले शरीरमा शक्ति प्रदान गर्छ । चनामा भरपुर मात्रामा आ’इरन हुन्छ जसको सेवनले शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढउनमा म’द्दत गर्छ र शरीरलाई स्वस्थ र फू’र्तिलो बनाउन म’द्दत गर्छ ।
चनालाई तरकारीको रुपमा पनि उप’योगमा ल्याउन सकिन्छ । अंकुरित चनामा भिटामिन बी क’म्लेक्स हुन्छ जसबाट शरीरलाई उर्जा प्राप्त हुन्छ । चनाको निय’मित सेवन गर्नाले शरीरमा पाचन शक्तिलाई क्रि’याशील बनाउन मद्दत गर्छ । चनामा प्रशस्त मात्रामा पोषक तत्व पाइनुका साथै यसमा भरपुर मात्रामा आ’इरन, सोडियम तथा सेले’नियम पाउन सकिन्छ।
चनामा प्रशस्त मात्रामा फा’इबर पाइन्छ, जुन पाचन प्रक्रि’यालाई बलियो बनाउन असाध्यै मह’त्वपूर्ण हुन्छ । रातभर भिजाएको च’नामा अदुवा, नुन र जिरा मिलाई बिहान खाने गर्नाले कब्जियतको समस्या क्रमशः कम हुँदै जान्छ । चना भिजाएको पानी खानु अझ लाभदायक हुन्छ ।
चनामा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियमलगायत तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यी तत्वले शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्छन् । चनामा ग्लुकोजको मात्रा कम हुन्छ । यो डायबेटिज भएका मानिसका लागि उत्तम भोजन हो । एकदेखि दुई मुठी चना हरेक दिन खाने हो भने रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रित अवस्थामा रहन्छ । डायबेटिज हुन पाउँदैन । भएको छ भने चनाले फाइदा पुर्याउँछ । -खबर हब बाट
शरीरमा दुबी आएर हैरान हुनुहुन्छ ? आ’त्तिनु पर्दैन उपचार स’म्भव छ
July 22, 2021 admin समाचार 6393
June 21, 2021 admin समाचार 3316
पाँच वटी श्रीमती बिहे गरिसकेका बजेको भाइरल जोडी मिडियामा (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 29, 2021 admin समाचार 3180
इलामको चुलाचुलि गाउ’पालिका वडा नं ३ स्थित एउटा एकदमै अचम्मको भाइरल जोडि बस्छन् ।जहाँ ७०बर्षिय बृद्धले १६ बर्षिय चेलिसग बिवाह गरे र यो जोडि बा’रम्बार भाइरल र सबैले रुचा’एको जोडि बन्दै आएको छ। ७० बर्षिय
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (222965)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (214976)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214652)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (212957)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211836)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210792)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209391)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209283)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177947)